Waxyaabaha Haweeney Kasta Oo Xaas Ah Waajib Ku Ah Inaysan Weydiin Seygeeda - Aayaha
Gabdhayahoow haddii aad jeceshihiin raggiina oo aad rabtaan guur farxad leh, waxaa jira waxyaabod aad ku qasbantihiin inaadan ka dalbanina raggiina,weydiinta waxyaabahan soo socda guurka ayay burburinayaan.
Hoos ka aqriso waxyaabaha xaas walba laga rabo inaysan weydiin seygeeda.
Weydiinta inuu iska dhaafo hammigiisa
Guurka caafimaad qabka ah, labada lamaane waxaa laga rabaa in mid walba kan kale uu ku taageero riyooyinkiisa iyo samirkiisa. Xaas ahaan, waa inaadan marnaba weydiin seygaaga inuu ka rajo dhigo hamigiisa. Intaad taas weydiin lahayd waa inaad tustaa inaad taageere u tahay mar walba.
Kala dooro aniga iyo hooyadaa
Qaladka ugu weyn, haweenka qaarkood waxay raggooda galiyaan xaalad halis ah oo ay ku yiraahdaan kala dooro aniga iyo hooyadaa. Ma hooyo ayaad gaari kartaa mise u darajo dhowdahay, xaalkaas hadaad gaartid rajo dambe oo aad leedahay ma jirto sidoo kale ma jiro qalad kaas ka weyn oo aad gali doonto intaad nooshahay, ninkaaga xaaskiisa waa tahay balse Hooyo waa booska koowaad mana loo abaal gudi karo, hooyo naftiisa dhan ayay leedahay. Marka ka fogoow xaalad noocaas ah, haddii kale waa mid abidkaa shalaay kugu reebi doonta.
Waa qalad xaas ahaan in ninkaaga aad weydiisid inuu jaro saaxiibadiis ama joojiyo waqtig auu la qaato. Waan ogahay waxaad rabtaa inaad waqti la qaadato seygaaga balse waxaa muhiim ah in saaxiibada mararka qaar waqti la siiyo.
Inaad isku dan noqotiin
Waa qalad kale in ninkaaga aad ka filato inuu jeclaado wax kasta oo aad jeceshahay. Waxaad lamaane ahaan u sameysaan ayaa ah wax lagu farxo. Haka filan seygaaga inuu jeclaado wax kasta oo aad adiga jeceshahay.
Isbedel haka filan
Waad ogeyd tayadiisa kahor inta aadan kula heshiin inuu ku guursado marka waxay noqon doontaa midaan micno lahayn inaad weydiiso inuu isbedelo guurka kadib. Haddii aad ogtahay inaadan ugu dulqaadan Karin ciladihiisa, waligaa ha guursan qofkaas. Adigaba qofka aad tahay ayaa tahay seygaagana qofka uu yahay ayuu isagana yahay. Ka filashada inuu isbedelo waxay guurkaaga u keeni doontaa burbur.